Moments leh saaxiibo 53
Xuquuqda, 1915, by HW PERCIVAL.
Waa maxay xiriirka u dhexeeya magnetismka iyo culeyska, iyo sidee ayay u kala duwan yihiin, haddiiba? Maxay tahay xiriirka u dhexeeya magnetism iyo xayawaanka xoolaha, iyo sidee ayay u kala duwan yihiin, hadday ahaan lahayd?
Sayniska togan ma sheegayo waxa loo yaqaan "gravish", wuxuuna qirtay inuusan aqoon. Xaqiiqooyinka, si kastaba ha noqotee, oo ay arkeen saynisyahano, oo loo yaqaanno gravitation, ayaa si kooban loo sheegay, inay jiraan jiidis jireed kasta oo jidhkasta ku leh jirkaaga oo dhan marka loo eego baaxadiisa, iyo in xoogga jiidida la yareeyo. kororka masaafada u dhaxaysa jirka oo waxaa lagu kordhiyaa sida ugu dhow. Isku xigxiga xaqiiqooyinka, ee loogu magac daray gravitation, waxay muujisaa lafteeda iyada oo aan tixgalin la siinin astaamaha waxyaabaha kujira jirka. Baahida jirka oo dhan, sidaa darteed, waxaa la sheegaa inay isjecelyihiin.
Magnetism-ka waa awood qarsoon oo ku saabsan dabeecadda uu saynisku ilaa hadda siinayo macluumaad yar, in kasta oo xaqiiqda qaar ka dhalisay awoodda magnetka ay caan ku yihiin saynisyahannada. Magnetism-ka waa xoog muujiya nafsadiisa. Magnetku waa jir ay dhammaan ama qayb ka mid ahi u eg yihiin isku-dheellitirnaan, iyo halka ay faasaska u dhexeeya ulaha ku yaal qaybgalayaashu ay isbarbar dhigayaan. Po positive positive positive the positiveicles positive positive positive po positiveles with positive with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with with point point point point point point point point point point point point point point point point point point point point point point point point point point point point point point Jidhku waa magnet, sida ku xusan tixgalinta walxaha qotoda leh ama faasas barbarro isbarbar socda. Magnet wuxuu u dhowaa kaamil ahaan sida magnet, iyadoo loo eegayo tirada walxaha ay leeyihiin oo leh silsilado faseexad iyo barbarro isbarbar socda, marka la barbar dhigo tirada walxaha aan lahayn dhismooyinka is barbar dhigaya oo aan ahayn sida awood u eg. Magnetism-ka wuxuu muujiyaa jirka iyadoo loo eegayo saamiga maaddada ku jirta tirada jirka ee magnetic, taas oo ah, isku-dheellitirnaanta iyo faasaska isbarbar dhiga. Magnetismku waa xoog ka jira meelkasta oo dunida ka mid ah, laakiin waxaa lagu muujiyaa oo keliya jirro leh qaab-dhismeedka birlabka ee walxaha ay leeyihiin. Tani waxay quseysaa walxaha aan nooleyn.
Isla xoog ayaa loo sara kiciyay awood sare ee jirka xayawaanka. Magnet-ka xayawaanku waa howl xoog leh oo loo maro jirka xoolaha, marka jirku ay yihiin qaar qaab dhismeed u leh. Qaab dhismeedka u noqonaya magnetic waa inuu ahaadaa sida walxaha ku jira unugyada iyo unugyada jirka xayawaanka inay yihiin qaab dhismeedka awooda magnetic adduunka oo dhan ay ku dhex socon doonaan. Si taas loo gaaro, qaab dhismeedku waa inuu u ekaadaa kan birlabta aan caadiga ahayn. Xaydhka jirka xayawaanka waa lafdhabarta, iyo unugyada xayawaanku waa kuwa magnetic marka walxaha ku jira unugyada waxaa lagu hagaajiyaa la waafajinaya qaybta u dhiganta laf dhabarta iyo dhuuxa lafta. Ficilka ka yimaada ulaha jirku waa habka dareemayaasha. Qubayska magnetic ama seeraha waa jawiga ku wareegsan jirka. Xayawaan kasta oo xayawaan ah oo yimaada saameynta duurkaan, waxay la kulmaan saameynta awoodda magnetic caalamiga ah ee ku qulquleysa jirka xayawaanka magnetic ka dibna waxaa loo yaqaanaa magnetismka xayawaanka.
Magnetism-ka xayawaanku ma aha magnetism shaqsiyeed, in kasta oo uu qayb ku leeyahay soo-saarka waxa loo yaqaan magnetism shaqsiyeed. Magnet-ka xayawaanku ma ahan hypnotism, in kasta oo dadka leh magnetismka xayawaanku ay u isticmaali karaan inay ku soo saaraan saamaynta hypnotic.
Qaabka loo yaqaan 'linga sharira', ama qaabka jirka aan muuqan, waa baakad keyd u ah nolosha. Mid ka mid ah hababka ay nolosha u shaqeyso waa magnetism. Haddii linga sharira ee jirka bini’aadamka ay leedahay wax u dhigmayaal jir ahaaneed oo loo dhisay sida lagu sheegay, taasi waa, walxaha kujira isku habeynta magnetic, ka dib ayeey qaban karaan oo keydin karaan nolosha waxayna u gudbin karaan nolosha iyadoo loo eegayo waxa loo yaqaan magnetismka xoolaha.
Jawaabta su'aasha ayaa ah in uusan jirin xiriir toos ah oo ka dhexeeya gravration iyo magnetism xayawaanka sida lagu sharaxay. Waxay ku kala duwan yihiin taas, illaa fooda-la-moodo, goob kasta waxay jiideysaa tiro kale, iyo xoogga loo yaqaan "gravitation" ayaa shaqeynaya mar walba; laakiin xoogga loo yaqaan magnetismka xayawaanku ma shaqeeyo waqti kasta, laakiin wuxuu ku shaqeeyaa xaaladahaas kaliya marka ay jiraan qaab dhismeedka xayawaanka, astaamaha kuwaas oo u eg sunta ubaxyada walxaha iyo xaqiiqda ama qiyaasta isleeg ee faasaska.
Sidee baa loo daweeyaa by magnetism xayawaanka?
Magnet-ka xayawaanku waa awood caalami ah oo ku shaqeysa jirka bini aadamka, kaasoo unugyadu ay yihiin kuwo amar ku leh loona habeeyo qaab gaar ah, kuwaas oo isu-imaatinka iyo habeynta ay ku kallifto nolosha guud ee jirka oo u oggolaaneysa ku wareejinta nolosha si toos ah xayawaanka kale.
Jirka jireed ee jirada ahi waa mid aan lahayn qaab ku habboon oo ka kooban walxaha ay ka kooban tahay, ama ay tahay mid carqalad ku ah socodka nolosha, ama isbeddello ku dhacay dartiis neefta caadiga ah iyo wareegga nolosha. Midkasta oo leh magnetism xayawaan ah, iyo midka magnetism magnetism-ka loo gudbiyo, ayaa laga yaabaa inuu ku daaweeyo cudurada dadka kale. Wuxuu ku bogsiin karaa joogitaankiisa kaligiis isagoo aan jir ahaan la xiriirin, ama wuxuu ku bogsiin karaa jirka taabashada midka la bogsanayo. Marka bogsashada lagu sameeyo joogitaanka bogsashada mid waxaa lagu sameeyaa xirida dadka buka jawiga ku xeeran midka bogsiinta leh. Jawigu waa qubeys magnetic, oo lagu eedeeyey nolosha adduunka oo u dhaqmeysa sida magnetism xayawaan. Magnetism-ka xayawaanku waa magac xumo u leh xoogga weyn ee nolosha guud, laakiin waxaan halkan ugu isticmaalnaa si aan ugu sii jirno adeegsiga caanka ah ee waqtiga. Qubaysku wuxuu ku shaqeeyaa jawiga qofka jirran wuxuuna dib u soo celiyaa wareegii xoogga nolosha guud ahaan, isagoo meesha ka saaray xannibaadaha, dib u soo kiciya wareegga, iyo dib-u-habeynta moleekulada ku jira unugyada, si xoogga nolosha uu u helo qulqulka si aan kala go 'lahayn oo xubnaha jidhka ayaa loo oggol yahay inay gutaan shaqadooda dabiiciga ah.
Bogsiinta magnetismiga xayawaanka, marka la sameeyo taabashada tooska ah ee qofka bogsiinaya, waxaa sida ugu fiican loo sameeyaa marka gacmaha kan bogsiinaya, u dhaqmo sida togan iyo ulaha taban, oo la dul dhigo jidhka ama qaybta waxyeeladu gaadhay. Magnetismku wuxuu ka soo bixi karaa qayb kasta oo jirka ka mid ah, sida indhaha, naasaha, laakiin sida ugu badan ee dabiiciyan loo adeegsado waa gacanta. Muuqaalka ugu muhiimsan ee waxtarka dawaynta waa in maskaxda maan dooriyaha ay faragalin ku sameyneysaa gudbinta magnetismka. Badanaa maskaxdu waxay saameyn ku yeelataa oo faragelisaa saameynta bogsashada, maxaa yeelay dhakhtarku wuxuu badanaa ku nacdaa inuu qasab ku yahay socodka magnetism maankiisa. Xaalad kasta oo daaweyntu ku shaqeyso maskaxdiisa kuna saabsan magnetismka, inta uu isku dayo inuu bogsado, wuu yeeli doonaa dhib, sababtoo ah maskaxdu ma saameynayso daaweynta, inkasta oo laga yaabo inay jiheyso oo midabayso magnetismka. Maskaxda ayaa faragelisa oo carqaladeysa ficilka dabiiciga ee magnetismka. Magnetismku si dabiici ah ayuu u dhaqmi doonaa haddii uusan maskaxda wax ka qaban. Dabeecadda, iyo ma aha maskaxdu, waxay saameyn ku leedahay dawaynta. Maskaxda dadku ma oga dabeecada, laftiisuna nafsaddeeda uma ogaato jirka. Hadday jidhka ku ogaato markaa maskaxdu isma dhexgaliso dabeecadda.